Amabhizinisi Amaphutha ama-4 Enza Lokho Kulimaze I-SEO Yasendaweni | Martech Zone
Izinguquko ezinkulu ziyaqhubeka ekuseshweni kwasendaweni, kufaka phakathi ukubekwa kwe-Google kwezikhangiso ezi-3 phezulu ngokucindezela phansi amaphakethe wazo wendawo kanye nesimemezelo sokuthi amaphakethe endawo kungekudala angafaka okufakwayo okukhokhelwayo. Ngokwengeziwe, ukuboniswa okuncishisiwe kweselula, ukwanda kwezinhlelo zokusebenza, nokusesha ngezwi konke kuneqhaza ekwandiseni ukuncintisana kokubonakala, kukhomba ikusasa lokusesha lendawo lapho inhlanganisela yokuhlukahluka nokukhazimula kokukhangisa kuzoba nezidingo ezingenalutho. Futhi-ke, amabhizinisi amaningi azobuyiselwa emuva ezingeni eliyisisekelo ngokungatholi okuyisisekelo kwe-SEO yendawo.
Nawa amaphutha ama-4 ajwayelekile ngokweqile ama-SEO enzayo amele ubuthakathaka obukhulu endaweni enzima ngokwengeziwe yokukhangisa:
1. Ukusetshenziswa okungalungile kwezinombolo zokulandelela izingcingo
Izinombolo zokulandelela izingcingo zaziyisikhathi eside embonini yezentengiso yasendaweni ngenxa yamandla azo amakhulu okwenza idatha ehlukahlukene, engahambelani kuwebhu yonkana futhi ibe nomthelela omubi emazingeni endawo. Noma kunjalo, zingasetshenziswa ngokunakekela ukuhlinzeka ngemininingwane ebalulekile emabhizinisini. Nawa amanye amathiphu wokuqalisa:
Nawa amanye amathiphu wokuqalisa:
Enye indlela ukufaka inombolo yakho yamanje, yangempela yebhizinisi kumhlinzeki wokulandela ikholi ukuze ukwazi ukulandelela izingcingo kunombolo yakho ekhona. Le ndlela ikukhulula esidingweni sokulungisa uhlu lwakho lwebhizinisi.
Noma, uma ukufakwa kuhlu kwebhizinisi lakho sekuvele kunamadwala, kungahambelani futhi kudinga ukuhlanzwa, qhubeka uthole inombolo entsha yokulandelela izingcingo, enekhodi yendawo, bese uyisebenzisa njengenombolo yakho entsha. Ngaphambi kokukhetha noma iyiphi inombolo, yiseshe kuwebhu ukuze uqiniseke ukuthi namanje akukabikho idatha enkulu yokunyathelisa elinye ibhizinisi elalisebenzisa inombolo leyo ngaphambilini (awufuni ukwenza izingcingo zabo). Ngemuva kokuthi uthole inombolo yakho entsha yokulandela amakholi, bese uqala umkhankaso wakho wokuhlanza izingcaphuno, usebenzise inombolo entsha kuzo zonke izinhlu zakho zebhizinisi lendawo, iwebhusayithi yakho, nanoma iyiphi enye ipulatifomu (ngaphandle kwezinkundla zokukhangisa ezikhokhelwayo) ezikhuluma ngenkampani yakho.
Ungasebenzisi inombolo yakho yokulandelela izingcingo eziyinhloko kuzikhangiso zakho zokukhokha njalo noma ezinye izinhlobo zokukhangisa online. Ukwenza kanjalo kuzokhawulela ikhono lakho lokulandela ukuthi imininingwane ivela ekumaketheni okuphikisana nokukhokhelwayo. Thola izinombolo zokulandelela izingcingo ezihlukile zemikhankaso yakho ekhokhelwe. Lezi ngokuvamile azikhonjiswanga izinjini zokusesha, ngakho-ke akufanele zilimaze ukuvumelana kwemininingwane yebhizinisi lakho yangakini. * Qaphela ukusebenzisa izinombolo ezihlukile zokulandelela izingcingo emikhankasweni engaxhunyiwe ku-inthanethi, ngoba bangayenza iwebhu. Sebenzisa inombolo yakho eyinhloko ukumaketha ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Ukulungele ukumba ujule kwezokuphepha nempumelelo ngokulandelela izingcingo? Ukufundwa okunconyiwe: Umhlahlandlela Wokusebenzisa Ukulandelwa Kwezingcingo Kusesho Lwasendaweni.
2. Ukufakwa kwamaGeomodifiers kumagama webhizinisi lendawo
Elinye lamaphutha ajwayelekile amabhizinisi ezindawo eziningi awenzayo ekumaketheni kwawo kwasendaweni okusetshenzelwa kulo kuzungeza igama elingukhiye eligcwalisa inkambu yamagama abo ebhizinisini ohlwini lwendawo lwasekhaya olunamagama ezindawo (idolobha, isifunda, noma amagama omakhelwane). Ngaphandle kokuthi i-geomodifier iyingxenye yegama lakho lebhizinisi elisemthethweni noma i-DBA, Imihlahlandlela yakwaGoogle wenqabe ngokusobala lo mkhuba, uthi:
Ukungeza imininingwane engadingekile egameni lakho (isb., “Google Inc. - Indlunkulu ye-Mountain View Corporate” esikhundleni se- “Google”) ngokufaka ama-tagline wokumaketha, amakhodi wesitolo, izinhlamvu ezikhethekile, amahora noma isimo esivaliwe / esivulekile, izinombolo zocingo, ama-URL ewebhusayithi, insiza / imininingwane yomkhiqizo, indawo/ ikheli noma izikhombisi-ndlela, noma imininingwane yokuqukethwe (isb. “Chase ATM in Duane Reade”) ayivunyelwe.
Abanikazi bebhizinisi noma abathengisi bangafaka imigomo ye-geo ezinkambeni zamagama ebhizinisi noma ngoba bezama ukuhlukanisa igatsha elilodwa kusuka kwelinye lamakhasimende, noma ngoba bezwa ukuthi bazokleliswa kangcono uma ukufakwa kuhlu kwabo kufaka le migomo. Ngokucatshangelwa kwangaphambili, kungcono ukukuyekela ku-Google ukukhombisa ikhasimende igatsha eliseduze naye, okwenziwa yiGoogle manje ngezinga elimangalisayo lobuciko. Ngokucutshungulwa kwamuva, kukhona iqiniso lokuthi ukuba negama ledolobha kusihloko sebhizinisi lakho kungathuthukisa amazinga, kepha akukufanele ukwephula umthetho weGoogle ukuze uthole.
Ngakho-ke, uma usungula ibhizinisi elisha sha, ungahle uthande ukucabanga ukusebenzisa igama ledolobha njengengxenye yegama lakho lebhizinisi elisemthethweni, elifakwe kusibonakaliso sakho sezinga lomgwaqo, iwebhu nezinto zokuphrinta, nokubingelela ngocingo, kepha, kunoma yikuphi okunye isimo, ukufakwa kwama-geomodifiers egameni lebhizinisi akuvunyelwe i-Google. Futhi, ngoba ufuna ezinye izinhlu zakho zebhizinisi lendawo zifane nedatha yakho ye-Google, kufanele ulandele lo mthetho cishe kuzo zonke ezinye izingcaphuno, ufake kuhlu nje igama lebhizinisi lakho ngaphandle kokulungisa yonke indawo.
* Qaphela ukuthi kunokwehluka okukodwa kokungenhla. I-Facebook idinga ukusetshenziswa kwama-geomodifiers kumabhizinisi wezindawo eziningi. Abavumeli igama elifanayo, okwabelwana ngalo phakathi kohlu lwe-Facebook Place. Ngenxa yalokhu, uzodinga ukwengeza isishintshi kusihloko sebhizinisi lendawo ye-Facebook Indawo ngayinye. Ngokudabukisayo, lokhu kudala ukungahambelani kwedatha kepha ungakhathazeki kakhulu ngalokhu kuhluka okukodwa. Wonke umuntu oncintisana naye onamamodeli webhizinisi lezindawo eziningi usesikebheni esifanayo, enikeza noma iyiphi inzuzo yokuncintisana / ukungabi nampumelelo.
3. Ukwehluleka ukuthuthukisa amakhasi okufika endaweni
Uma ibhizinisi lakho linamagatsha ama-2, 10 noma ama-200 futhi ukhomba konke ukufakwa kuhlu kwebhizinisi lendawo namakhasimende ekhasini lakho eliyisiqalo, ulikhawulela kakhulu ikhono lakho lokuletha umuzwa oyingqayizivele, owenziwe ngezifiso wamaqembu abasebenzisi ahlukile.
Amakhasi okufikela kuwo (aka 'amakhasi afika endawo', 'amakhasi okufika edolobheni') alwela ukuletha imininingwane efanelekile kumakhasimende (kanye ne-search engine bots) mayelana negatsha elithile lenkampani. Le kungaba yindawo eseduze nekhasimende, noma indawo ayicwaningayo ngaphambi noma phakathi nohambo.
Amakhasi okufikela kuwo kufanele axhunyaniswe ngqo / kusuka kuhlu lwebhizinisi lendawo ngalinye, futhi kufinyeleleke kalula kuwebhusayithi yenkampani ngemenyu esezingeni eliphakeme noma iwijethi yesitolo. Nakhu okufanele ukwenze nokungafanele ukwenze:
Qiniseka ukuthi okuqukethwe kulawa makhasi kuyi esiyingqayizivele. Ungamane ushintshe amagama amadolobha kulawa makhasi bese uphinde ushicilele okuqukethwe kuwo. Tshala imali ekubhaleni okuhle, nobuciko ekhasini ngalinye.
Qiniseka ukuthi into yokuqala ekhasini ngalinye yi-NAP ephelele yendawo (igama, ikheli, nenombolo yocingo).
Ingabe ufingqa ukhiye brand, imikhiqizo nezinsizakalo enikelwa egatsheni ngalinye
Faka ubufakazi kanye nezixhumanisi kumaphrofayili wakho wokubuyekeza omuhle wegatsha ngalinye
Ungakhohlwa ukufaka izinkomba zokushayela, kufaka phakathi ukukhomba izivakashi eziyizimpawu ezinkulu zingabona kalula eduze kwebhizinisi
Ungalibukeli phansi ithuba lokuthi i-pitch kungani ibhizinisi lakho kuyisinqumo esihle kakhulu edolobheni ngalokho okudingwa ngumsebenzisi
Ungakhohlwa ukunikela ngendlela enhle yokuxhumana nebhizinisi ngemuva kwamahora (i-imeyili, umyalezo wefoni, ingxoxo ebukhoma, umbhalo) ngesilinganiso sokuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuzwa impendulo
Ukulungele ukungena ngokujulile kubuciko bokwenza amakhasi afika kahle edolobheni? Ukufundwa okunconyiwe: Ukunqoba Ukwesaba Kwakho Amakhasi Wokufika Wendawo.
4. Ukunganaki Ukungaguquguquki
Ochwepheshe bezezimboni bayavuma ukuthi lezi zinto ezi-3 zilimaza kakhulu kunanoma yiziphi ezinye kumathuba ebhizinisi okujabulela amazinga aphezulu endawo:
Ukukhetha i akulungile isigaba sebhizinisi lapho kwenziwa uhlu lwamabhizinisi endawo
Ukusebenzisa a fake indawo yebhizinisi nokuba ne-Google ithole lokhu
Having ukungafani kahle amagama, amakheli, noma izinombolo zocingo (i-NAP) kuwebhu yonkana
Izici ezimbili zokuqala ezingezinhle kulula ukuzilawula: khetha izigaba ezifanele futhi ungalokothi wenze inkohliso idatha yendawo. Okwesithathu, nokho, yilokho okungaphuma esandleni umnikazi webhizinisi engazi nakwazi lokho. Idatha engalungile ye-NAP ingavela kunoma yikuphi noma kukho konke okulandelayo:
Izinsuku zokuqala zosesho lwasendaweni lapho izinjini zokusesha zidonsa ngokuzenzakalela idatha kusuka emithonjeni ehlukahlukene evuliwe nengaxhunyiwe ku-inthanethi, okungenzeka ukuthi ibinephutha
Ukuvuselela ibhizinisi, ukuhambisa, noma ukushintsha inombolo yalo yocingo
Ukusetshenziswa okungalungile kwezinombolo zokulandelela izingcingo
Ukukhulunywa okuncane okusemthethweni kwemininingwane emibi, njengokuthunyelwe kubhulogi, izindaba eziku-inthanethi, noma izibuyekezo
Idatha eyabiwe phakathi kokufakwa kuhlu okubili idala ukudideka noma ukufakwa kuhlu okuhlanganisiwe
Imininingwane engahambelani kuwebhusayithi yenkampani uqobo
Ngenxa yendlela idatha yendawo yebhizinisi ehamba ngayo kuyo yonke imininingwane ye- indawo yokusesha yendawo, idatha emsamo yesikhulumi esisodwa ingaconsela phansi kwabanye. Ngenxa yokuthi i-NAP embi kukholakala ukuthi inomthelela wesithathu omubi kakhulu emazingeni osesho lwasendaweni, kubaluleke kakhulu ukuyithola nokuyihlanza. Le nqubo ibizwa ngokuthi 'yi-citation audit'.
Ukucaphuna ukucaphuna ngokuvamile kuqala ngokuhlanganiswa kosesho olwenziwa ngesandla ngokuhlukahluka kwe-NAP, kanye nokusetshenziswa kwamathuluzi wamahhala afana nalawa Ukuhlola Uhlu lweMoz, okwenza ukwazi ukuhlola ngokushesha impilo ye-NAP yakho kwamanye amapulatifomu abaluleke kakhulu. Lapho nje i-NAP embi isitholakele, ibhizinisi lingasebenza ngesandla ukuyilungisa, noma, ukonga isikhathi, lisebenzisa isevisi ekhokhelwayo. Ezinye izinsizakalo ezidumile eNyakatho Melika zifaka phakathi I-Moz Local, I-Whitespark, Futhi Yext. Umgomo wokugcina wokucwaningwa kwamabhuku ukuqinisekisa ukuthi igama lakho, ikheli, kanye nenombolo yocingo kuhambisana ngangokunokwenzeka, ezindaweni eziningi ngangokunokwenzeka, kuwebhu yonkana.
Izinyathelo Ezilandelayo ze-SEO Yasendaweni
Eminyakeni ezayo, ibhizinisi lakho lendawo lizohlanganyela ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokufinyelela kwezokumaketha ukuze zihambisane nendlela i-Intanethi nokuziphatha komsebenzisi okuguqukayo ngayo, kepha konke lokhu kudinga ukwakhelwa phezu kwesisekelo sezisekelo ezinolwazi. Ukungaguquguquki kwe-NAP, ukuhambisana nomhlahlandlela, nokuthuthukiswa kokuqukethwe okunamathela emisebenzini enengqondo, ehamba phambili kuzoqhubeka nokubaluleka kuwo wonke amabhizinisi endawo ngekusasa elibonakalayo, kwakheke iphedi yokuqalisa umsindo lapho kuzosekelwa khona konke ukuhlola kobuchwepheshe bosesho obusafufusa bendawo. Ufuna ukubona ukuthi ibhizinisi lakho livela kanjani kuwebhu yonkana?
Ufuna ukubona ukuthi ibhizinisi lakho livela kanjani kuwebhu yonkana?
Thola Umbiko Wamahhala Wokufakwa Kuhlu Wendawo WakwaMoz
Tags: ikheliukulandelela ikholishayela izinombolo zokulandelelaindawo ye-facebookama-geomodifiersI-google mapsI-Google + Yendawoukusesha kwendawoseo sendawomozmoz yendawoIgamaI-NAPinombolo yocingoseo
UMiriam Ellis uyingxenye ye- I-Moz Local iqembu. Lapho engabhali iphephandaba lanyanga zonke le-Moz Local futhi ephendula imibuzo esithangamini se-Q & A, usiza amaklayenti akhe ukuba aqaphele amasu awo e-Local Local enkampanini yakhe I-Solas Web Design.
I-Google Analytics Yethula Idatha Yesitudiyo (i-Beta)